इटहरीमै यस्तो: सुरजकुमारले तीन दिनपछि दिसा गरे एक तोला सुनको सिक्री ! — Sanchar Kendra
इटहरीमै यस्तो: सुरजकुमारले तीन दिनपछि दिसा गरे एक तोला सुनको सिक्री !
इटहरीका सुरजकुमार नेपालले तीन दिनपछि सुनको सिक्री दिसा गरेका छन् । उनले तीन दिन अघि उनले विराटनगर जलजला रोडको राठी ज्वेलर्समा ग्राहक बनेर गई एक तोला सुनको सिक्री नै निलेका थिए ।
त्यसपछि उनलाई कोशी अञ्चल अस्पतालमा प्रहरी निगरानीमा राखिएको थियो । नेपालले सिक्री निलेको भन्दै ज्वेलर्सका सञ्चालक अरुण राठीले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो । एक्स–रे रिपोर्टमा पेटभित्र धातु देखिएपछि नेपाललाई अस्पतालमै प्रहरी निगरानीमा राखिएको थियो ।
प्रहरीले नेपाललाई चोरी मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । मोरङका प्रहरी उपरीक्षक मनोज केसीले नेपाललाई सुन चोरीको आरोपमा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
२०७५ साउन १४ मा प्रकाशित ।
अदालतको गेटैमा व्यवसायी लामामाथि खुकुरी प्र’हार, केछ अवस्था ?
एमाले बैठकमा लफडा, ओली बारे रघुवीर महासेठले गरे यस्तो सनसनीपूर्ण खुलासा